musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Iyo itsva Tourism Gamba Inobuda kubva kuAlbania
Albania Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau • Wtn
Iyo Horo yeInternational Tourism Magamba yakavhurwa nekusarudzwa chete kuti uone avo vakaratidza hunoshamisa hutungamiriri, hunyanzvi, uye zviito. Tourism Magamba anoenda padanho rekuwedzera.
Iyo Yegore kana Yakakosha Tourism Gamba Mubairo unopihwa kunhengo dzakasarudzwa dzeImba yeInternational Tourism Magamba.
Nhasi Muzvinafundo Klodina Gorcia anobva kuTirana, Albania akagamuchirwa seGamba reKushanya kuInternational Hall of Tourism Magamba.
Klodiana Gorica ari purofesa weSustainable Tourism Management, Kushambadzira Kwekushambadzira, uye Kushambadzira Kwekushanya kuYunivhesiti yeTirana.
Akasimbiswa muImba yeInternational Tourism Magamba neWorld Tourism Network nhasi.
Horo ye International Tourism Magamba yakavhurwa nesarudzo chete kuziva avo vakaratidza hunoshamisa hutungamiriri, hunyanzvi, uye zviito. Tourism Magamba anoenda padanho rekuwedzera.
Prof. Gorica akasarudzwa kuImba yeHurumende Magamba naBlendi Klosi, Gurukota rezveKushanya neZvakatipoteredza kuAlbania.
1. Akave, kwemakumi emakore, munhu akakosha akazvipira kusimudzira Nyika dzeWestern Balkan uye kunyanya Albania senzvimbo yakasarudzika muEurope uye nekuenderera;
2. Akashanda zvakanyanya mukugadzira zvematongerwo enyika zvakanakisa uye nzira dzekuzadzisa kugadzikana. kushanya munzvimbo
3. Nekuda kwekugona kwake uye kushanda nesimba kwagadzira kudyidzana kwakasimba pakati peDzidzo yepamusoro maInstitute nemasangano eruzhinji (Ministry of Tourism uye Zvakatipoteredza), muzvirongwa zvakajairika nezvirongwa;
4. Nekuda kwekuita kwake uye netiweki yepasi rose muBalkan Region, asi kwete chete, mu2017 (30th gore rekushanya kwakasimba), pamwe neInSET (www.anetin.al) kwaari CEO uye Executive Director uye achitungamirwa neUNWTO, uye zvakare Ministry of Tourism muAlbania, akaronga Musangano Wepasi Pose wekutanga wekuti "Kuvaka kudyidzana pakati peveruzhinji-vakazvimirira kuitira Sustainable Development kuburikidza neKushanya".
Vatambi vakakosha zvikuru vaipa nguva dzakakosha uye dzakakosha dzekushanya kwakasimba muAlbania.
Kubva 2011 kusvika 2016 anga ari Vice Dean muFakisheni yeEconomy, University of Tirana; nhengo yeSainzi Kanzuru 2008-2012, uye mushure megore 2016 nhengo yeKanzuru yePurofesa; Nyanzvi yeNational muDzidzo yepamusoro Hunhu Assurance Albanian Agency kubvira 2008; inobatanidzwa muzvirongwa zvepasirese, maforamu uye mapurojekiti, kwete chete nyanzvi asi achishanda seMutauri weGuest, achigadzira maratidziro eBalkan neEuropean Sustainable Tourism, kuongorora, kugadzira nekugadzirisa tafura dzakatenderedza uye maforamu; nhengo mubhodhi revatariri / komiti yekutsvagisa / mutauri wehurukuro mumajenali epasi rese nemisangano, uye zviitiko zvepasi rose mukudzidziswa nekudzidzisa kubvira 1997 mumayunivhesiti ekunze.
Munyori uye coauthor mune akasiyana sainzi mabhuku e13, matatu monographs (seinotevera) yakaburitswa kubva kuSpringer neIEDC, Slovenia; Springer, Germany, uye Switzerland; kutsikisa chinyorwa mumisangano yepasi rese yesainzi nemagazini. Zvekutsvagisa zviitiko kunze kwenyika mumayunivhesiti epasi rese munyika dzakaita seUK, USA, Belgium, Portugal, Norway, Slovenia, Italy, France, Israel, Portugal, Croatia, Austria, Serbia, Bosnia neHercegovina, Montenegro, Turkey, Macedonia, Bulgaria, Rumania, nezvimwe. .
"Kushanya munharaunda - Muenzaniso unounza kugadzikana kwehupfumi"
"Muenzaniso weRuzivo Sosaiti Management kuburikidza neICT Musika Ekuvandudza Masystem - kunyorera muAlbania nedzimwe nyika dzichiri kusimukira"
"Tsika Inochengetedza Tourism".
Juergen Steinmetz, sachigaro weWorld Tourism Network anoti: “Tinogamuchira Purofesa Gorica kuti agamuchirwe International Horo yeHurumende Magamba. Hunhu hwake, mareferenzi ake, uye ruzivo rwake zvinonakidza. Isu tinodada kuva naye zvakare senhengo yeWorld Tourism Network. "Nyika inoda vatungamiriri vakaita saPurofesa Gorica."
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Tourism Hero chirongwa shanya www.mapfumo.travel
Kashmir Tourism anoti:
Gunyana 11, 2021 pa 07: 37
Makorokoto kuna Muzvinafundo Klodina Gorcia nekucherechedzwa nebasa rake rakasarudzika kwakakosha kwazvo kubvuma kuyedza kwevanhu uye nemasangano ari kushanda mukugadzira kushanya kwakasimba uye neushamwari. isu tinoda vanhu vazhinji saPurofesa Klodina Gorcia kuti vaparidze meseji uye vashande mune ino indasitiri.